Izindlela ezi-5 ezihamba phambili ze-iMovie zeWindows 10 - Ama-Softwares
Ngemuva kokusungulwa kwekhamera, i-tech yathuthuka kakhulu emhlabeni wamavidiyo. Amavidiyo angukuzijabulisa okukhulu kwabantu emhlabeni wonke. I-Apple ibilokhu iza nekhwalithi engcono kakhulu yesoftware kuwo wonke amadivayisi ayo. iMovie ingenye software engcono kakhulu yokuhlela ividiyo, kodwa iMovie for windows ayitholakali.
Uyakujabulela ukukukhumbuza ngohambo lwakho? Ngakho-ke, kungani ungabathathi bonke?
Nge-iMovie, ungahlela amavidiyo akho ngezindlela ezinhle kakhulu. Emhlabeni jikelele le software isetshenziswa ngama-vlogger aphesheya nawazwelonke. Kepha iqiniso lokuthi limisa abaningi ekusetshenzisweni kwalo kuliqiniso. Kukhawulelwe kubasebenzisi be-Apple Mac kuphela, kepha akudingeki ukuthi ucasuke njengoba sikulethe lapha ukuthola izixazululo ezinhle kakhulu.
Abahleli bamavidiyo abangochwepheshe nabathwebuli bezithombe bafuna ezinye izindlela ezingabanikeza ikhwalithi nezici ezingcono kakhulu ngemuva kweMovie.Lesi sihloko sizobe sibonisa ezinye izindlela ezingcono kakhulu ze-iMovie kumawindi wokuhlela ividiyo.
Izindlela ezihamba phambili ze-iMovie zeWindows 10:
I-Movavi ingenye yesoftware yokuhlela ividiyo ehamba phambili nezindlela ezinhle kakhulu ze-iMovie yamawindi.
Lokhu okulandelayo izici eziyinhloko Movavi ezenze kwaba ohlwini ezinye izindlela best of iMovie for windows.
Amalimu:Lesi sici sinikeza abasebenzisi ukuthi baphinde benze umoya kumavidiyo akho ngezikimu zombala. Ungakhetha noma yiluphi uhlelo lombala kunoma iyiphi i-movie ongayithanda bese uyifaka kuvidiyo yakho.
Ukuvumelanisa:Le software ikusiza ukuvumelanisa okuqoshiwe okulalelwayo nevidiyo okurekhodwe ngokwehlukile.
Ithuluzi le-logoIthuluzi le-logo likusiza ukwengeza noma iyiphi i-logo kuvidiyo yakho. Kuzokwenza ube nentshisekelo yokuhlela.
Buyekeza ngokuzenzakalela:Isoftware ivuselela zonke izici ezintsha ngokuzenzakalela. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi bayakujabulisa ngokumangala.
Ezinye izinto eziningi ezifana nezihlungi, ukuphenya isithombe, ukulungiswa okuphezulu, ukusondeza isithombe, nokunyakaza kuzokukwenza uzizwe wanelisekile noma ungenayo iMovie.I-Movavi ibonakala iyindlela engcono kakhulu kune-iMovie yamawindi, njengoba inezici eziningi ezijabulisayo nezenelisayo. Inikeza zonke izixazululo ezingaba khona ukuhlangabezana nezidingo zakho zokuhlelwa kwevidiyo.
Isistimu yokuvuselela ngokuzenzakalela.
Ukuvumelanisa kokuqoshwa komsindo nevidiyo.
Ukulanda ividiyo ungaxhunyiwe ku-inthanethi akunakwenzeka.
2. I-Wondershare Filmora Video Editor
Ungomunye wabahleli bevidiyo abahamba phambili abasebenza njengenye indlela engcono kakhulu ye-iMovie yamawindi, amadeski, nePC.Iyahlukahluka maqondana nemakethe yabathengi bayo. Cishe wonke umuntu angasebenzisa le software ukuhlela amavidiyo, ngoba kunzima ukusebenzisa. Uma ungeyena umhleli wevidiyo oqeqeshiwe kepha uhlose ukuba munye, i-Filmora iyindlela engcono kakhulu kuwe.
Okulandelayo ezinye zezici ezibalulekile zale ndlela ehlukile ye-iMovie yamawindi.
Inokusekelwa kwefomethi ebanzi.
Imisebenzi yokuhlela inethonya elikhulu.
Inemiphumela ebukekayo yokubuka.
Isoftware inezici eziningi ezingasiza ekuhleleni ividiyo futhi iyenze ibukeke imangalisa. Inezinhlobonhlobo zemiphumela nezinketho zokwanelisa izidingo zakho.Unganciphisa noma ufake izithombe zakho, amavidiyo ngokushesha okukhulu. Umuntu angangeza ukubuyela emuva ngokukhetha noma imuphi umsindo owuthandayo. Ukurekhoda kwezwi kungangezwa kuvidiyo njenge-backtrack. Inezici ezihlukile ezifana ne-mosaic, ukubhekana nobuso nokutsheka, njll.
Inenketho yokulayisha ividiyo yakho ezinkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene ngqo, noma ungayilondoloza kudivayisi yakho.Iyahambisana nawo wonke umsebenzisi futhi ingahle ibhekwe njengeyona ndlela engcono kakhulu ye-iMovie yamawindi.
Ihambisana nawo wonke amawindi aze afike kumawindi 10
3. Isinqamuleli Sevidiyo
Isinqamuleli sevidiyo singesinye isoftware ehlukile ye-iMovie yamawindi. Le software ingumthombo ovulekile, futhi iyahambisana neMac, Linux, namawindi.
Ezinye izici zayo ziyefana neFilora, kodwa noma kunjalo, ihlukile ngezindlela eziningi.Okulandelayo ezinye zezici zayo ezivelele:
It has ebanzi yoxhaso efana Filmora.
I-interface yakhelwe kahle.
Izihlungi ezenziwe ngokwezifiso.
Ukulayisha okuqondile kuzinkundla zokuxhumana.
Isoftware inikezela ngezici eziningi ezingakusiza ekuhlelweni okuhle kwevidiyo.Inezici ezithile ezifana neFilora, njengokusekelwa kwefomethi ebanzi, kepha iza nezimpawu ezishayayo zezihlungi ezenziwe ngokwezifiso. Ukusebenzisa le software kungaba yinto enhle kuwe.
Ukuthunyelwa okunzima kwamanye amadivayisi.
Akukho ukubuka kuqala kwezihlungi ngaphambi kokusetshenziswa.
4. I-Adobe Premiere Elements
Itiyithuluzi lokuhlela ividiyo lamahhala elisiza abasebenzisi bewindows nabakwaMac ukuhlela amavidiyo abo asezingeni eliphakeme.Ithuluzi elisezingeni eliphakeme, futhi inezici eziningi ezenza ukuthi zivelele futhi zikhetheke kunenye isoftware njengendlela engcono kakhulu ye-iMovie yamawindi.
Okulandelayo ezinye zezici ezivelele zezakhi ze-adobe premiere.Ukuhlela okuzenzakalelayo okuhlakaniphile kukulethela ushintsho oluphawulekayo olutholwa yividiyo yakho ngemuva kokuyibeka kule fomethi.
Ukudalwa okuzenzakalelayo kuklanyelwe ukwengeza izihlungi nemiphumela ezithombeni zakho ngokuzenzakalela. Ukusebenzisa le software kungakusiza ukuthi ufiphaze noma ukhanyise noma iyiphi indawo ethile kumavidiyo akho ukuze ihambisane nezidingo zakho nezidingo zakho.Inomphumela womsindo owehlisiwe, othuthukisa amavidiyo we-grainy owadubule ekukhanyeni okuphansi.
I-Adobe ingenye yesoftware ethandwa kakhulu yokuhlela ividiyo. It has izici eziningi ezithuthukile ezenza kube ohlwini top emihlanu engcono iMovie ehlukile windows.
Ukudalwa kwayo okuzenzakalelayo, ukuhlela okuhlakaniphile, nokukhethwa kwendawo okuqondile kwemiphumela ehlukile kuyenza ikwazi ukusebenziseka kalula. Inezinye izinto eziningi, njengokulungiswa kwesimo sobuso, ukuxuba kabusha ithrekhi yomculo, nokususwa kwenkungu okwenza kunconywe kakhulu.
Ukuzilibazisa okuzenzakalelayo nezici zokuhlela ezihlakaniphile
5. I-Avidemux Video Editor
Umhleli wevidiyo we-Avidemux uyithuluzi eliyisisekelo lokuhlela elisetshenziswe kabanzi njengenye indlela ye-iMovie yamawindi.Iyahambisana namawindi, iMac, iLinux namanye amapulatifomu. Kubuye kube lula ukusebenzisa, futhi imvamisa, kusetshenziselwa ukuhlela amavidiyo alula.
Okulandelayo izici ezivelele ze-Avidemux:
Iyakwazi ukuveza amafayela.
Ingenza ngezifiso imibhalo.
Inekhono elisebenzayo lokusika amavidiyo futhi uwenze amancane.
Kufanele uhambele isihleli sevidiyo se-Avidemux uma ungeyena umhleli wevidiyo ochwepheshe futhi ufuna isoftware yokuhlela ividiyo elula.Inokusikwa, ukusika, ukuhlunga, nokubeka imisindo ethile ividiyo elula engayifuna.
Ukucutshungulwa kwamavidiyo kuyashesha.
Ayikufanelekeli ukuhlela ividiyo okuyinkimbinkimbi
Yize iMovie iyi-software ehamba phambili yokuhlela ividiyo, ayitholakali kumadivayisi ngaphandle kwe-Mac, ngakho-ke abahleli bevidiyo kumele babe nenye indlela engcono kakhulu ye-iMovie yamawindi.I-athikili engenhla iveze ulwazi mayelana nezinye izindlela ezingcono kakhulu ze-iMovie yamawindi. Yonke isoftware eshiwo ngenhla iyahambisana namawindows.
Kulula ukufinyelela kuzo futhi kulula ukuzisebenzisa. Ungaba nokuhlelwa okuhle nokufaniswa kwamavidiyo wakho, izithombe, nokurekhodwa komsindo ndawonye kusibonisi esitangazayo.Le software izosiza ukubheka ama-vlogs wakho we-Youtube alandelayo noma amavidiyo we-Instagram, noma ukulayishwa kwevidiyo ye-Facebook kumangalisa kakhulu, kugadle futhi kube namandla.
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeCamScanner
IDisney Plus Bundle (2020) - Thola iDisney +, iHulu ne-ESPN +
ikhodi yephutha le-nvidia geforce 0x0001
indlela yokubuka ingxoxo ye-twitch kumdlalo
bukela ama-movie wamahhala okusakazwa mahhala ku-inthanethi
ngisesha kanjani ku-pluto tv
amawebhusayithi ukubuka ama-movie mahhala ku-inthanethi